Author: Fezil Nelmaran
Meeqa lacag ah ayaad heysataa?
Waxaan ugu dambayntii Eebbe ka baryayaa in uu aniga “turjubaanka”, qoraaga naxwahan iyo intii i caawisayba uu miisaanka wanaagyadeena noogu daro maalin aysan xoolo iyo caruur waxba tarayn. Newer Post Older Post Home.
Xarfaha macnayaalkooda waxay u kala baxaan shan qaybood: Magaca qalabka waa sida: Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. B Waa inuu qaataa bzrashada ka mida xarafyada joogtada alifka ama hamzada qofka hadlaya kaligiis: Ka dibna waxaan bare ka ahaa jaamacadda Lubnaan iyo jaamacadda Beyruut anigoo dhigayey isla labadaas maaddo oon kor ku soo sheegey. Koox kasta oo iskabadasha qaabkeeda keliga ayaa la yiraahdaa koox matoosane sida: Lahaanshaha waa laba jaad: Tusaalahanna waa qaababka kala duwan ee falalka layaqaanaha iyo lamayaqaanaha:.
B Kalasaaraha gaarka ah waa sida: Meeqa waano ayaa ku soodhaaftey oodan kuwaano qaadan! Magacyaalka muujiyaha waa kuwan: Sida la og yahay qofkii ugu horeeyey ee qora naxwaha carabiga wuxuu ahaa Abul Aswadi Addualiyyu, waxaana faray inuu qoro madaxweynihii afaraad ee muslimiinta Cali binu abii Daalib Eebbe ha ka raali noqdee.
Waa inse hortooda ahaataa diidmo xaraf ama magac ama fal ama diido iyo dhawaaqto sida: Waxaa daabacaadiisii ugu horeysay ay soo baxday 13kii, Febraayo, ka. Oldest living man confirmed as Israeli Auschwitz survivor. Dhamaadka “tan iyo” sida: Qaarna waxay isubedelaan hal qaab, falkaasi ayaana la yiraahdaa ismabedelaha.
Kusoo dhawow boga barashada Carabiga lagu hadlo lahjadaha. Haddii ay ku bilaabato ta’da dheeraadka ah, ismabedelayso: Waxaa hadalka loo xoojiyaa adigoo hadalka ku celiya, dhaarta, iyo inuu qaato qodobada xoojinta sida: Waana inuu ahaadaa qaabka tagtada oo kaliya sida: Waxaa mahad iska leh Eebbe, nabadgalyadiisana korkooda ha ahaato addoomadiisa uu doortay. Waxaana isla xiligaasi la socdey manaahijta jaamacadaha Masar iyo Ciraaq ee maadadaasi. Kenya oo sheegtay in ay doonayso in Qoxootiga Soomaaliyeed ee Dhadhaab laga saaro Dalkeeda.
Haddii aad xiiseyneysid kitaabkan oo aad dooneysid inaad ogaato sidii lagu heli lahaa, iyo haddii aad ku aragtid khaladaad xagga tarjamada ah, Eebbe kaliya ayaa dhamaystirane ha kaa abaalmariyo.
Census Bureau data from Hamzada dhajisada waa sida: Hadduu ku koobnaado saamaynta falka falihiisa sida: Building a business on the needs of immigrants – Monitor Saint Paul. Lafalaha magacyada waa lafalaha dhan, lafalaha, lafalaha dartiis, lafalaha lajira, lafalaha goorta iyo goobta, qaabka falka, kalasaaridda, kabaxsanidda, dhawaaqtada iyo raacdada lafalaha. Tilmaamaha wuxuu sheegaa qofka yimid wuxuu yahay sida: Nooca koobaad qarashkiisu waxaa uu ka mid yahay midka koorsada balse nooca labaad oo ah midda aan inagu u soo daabaceyno oo lahaan doonta gal adag ardaygu isagaa la baxaya lacagta barashara baxaysa Daabacaadda iyo Postada aan ugu direyno.
Somali women have called for greater political participation and power sharing, as the country marked International Women’s Day, thanks to the prevailing peace brought about by the AMISOM troops.
Dheddiga fasirnaanta waa magac kasta oo qaadan mid ka mida sumadaha dheddiga sida: Hordhaca qoraha Labaatan sano ayaan ahaa madaxa manaahijta culuunta afka carabiga iyo dhaqangelintooda anigoo markaas ahaa ustaaz “bare” ka dhiga barasada Dimishiq naxwaha “xeerarka afka” iyo sarfiga “rogrogmadka afka”. Hamzada, alifka, ba’da, ta’da, siin, fa’, kaaf, laam, miim, nuun, ha’, woow iyo ya’.
Qoralka waa la heli karaa bbarashada uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Minnesota judge’s plan to ‘de-radicalize’ terror defendants dubious, say experts – Fox News.
Erayga naxwe ereybixin naxwe ahaan waxaa loola jeedaa xeerka barashada afka. Ta’da dhaarta iyo woowgeeda sida: